Malunga nathi - Qingdao ngerabha Six ngerabha Hose Co., Ltd.
Qingdao ngerabha Six Hose
Qingdao ngerabha Six ngerabha Hose Co., Ltd.. ngaphambili yayisaziwa njengeQingdao yesithandathu yeRubber Factory yoXinzelelo oluPhezulu lweFektri yoMphathiswa Wezolimo. Inkampani yasekwa nge-29 ka-Agasti ka-1952 yaza yahlengahlengiswa ngo-Disemba 15, 2003.
Inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kuphando lwenzululwazi kunye netekhnoloji, kwaye izinikezele kuphuhliso kunye nophando lweemveliso eziphezulu, ezichanekileyo kunye nokusika iminyaka emininzi. Umvelisi ophambili kunye nesiseko kwishishini lamathumbu e-China kwaye ikalwe uphawu lwentengiso iminyaka emininzi.
Ukuthembela kwimithombo yobuchwephesha eyomeleleyo kunye nophando lwenzululwazi kunye nezixhobo zovavanyo eziphambili kunye nezixhobo, inkampani ngokulandelelana iphuhlise iimveliso ezahlukeneyo ezinje ngemibhobho yokomba, ithumbu leoksijini, kunye nemibhobho yentsimbi yoxinzelelo oluphezulu. Isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi yamalahle engaphantsi komhlaba yokuhambisa amanzi, ukubhola i-oyile, oomatshini bemizi-mveliso kunye nokumbiwa kwemigodi, ukutya, umzila kaloliwe, isikhephe, inqanawa kunye namanye amashishini.
·Uluhlu lweMveliso ebanzi
· Intsimbi eboshiweyo yentsimbi yombhobho
· Intsimbi Wire Spriral fracturing Hose
· Ifayibha yomelele ngerabha Hose
· Ubushushu Resistant Oil Hose
· Ukuhlamba umbhobho
· Icinezelweyo irabha yomoya
· Ubushushu High Resistant Steel Wire suka Steam Hose
· Umbhobho oQokelelweyo weePilot
· Uxinzelelo oluphezulu lokomba umbhobho
· Intambo yentsimbi eboshiweyo yerabha esingxotyeni sayo
· Iindibano zeeHydraulic Hose Assemblies
·Elungiselelweyo neqhubekayo imveliso uphando kunye nophuhliso
·Utyalomali oluqhubekayo lobuchwephesha kunye nokuyila
·Elungiselelweyo OEM ubuchwepheshe kunye nenkonzo
·Imveliso engqongqo kunye nolawulo lomgangatho wovavanyo olungaphezulu komgangatho we-ISO9001.
·Umthamo owaneleyo wemveliso ngenkxaso yokufika kwangexesha.
·Abathengi bagxila kwaye bazinikele kubambiswano lwexesha elide.
·Iyaqhubeka ukukhula kwaye yanda ukuya kuluhlu lwemveliso ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.